FUNDA NGOLUNYE ULWIMI Cakchiquel (Western) ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBatak (SaseToba) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMixe IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTlapanec IsiTok Pisin IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
Ngaba uThixo uza kubayeka abantu baqhubeke bezilawula baze babeke ikamva labo engozini? Akunjalo, kodwa njengoko sibonile, uza kungenelela aze abuphelise ubugxwayiba nobunzima obebusoloko bukho kangangamakhulu eminyaka. UMdali wethu nowomhlaba ufuna wazi xa selikufuphi elo xesha. Usazisa njani oko?
Masikuzekelise ngolu hlobo oku: Xa uza kuthatha uhambo ngemoto, usenokuqala ujonge imaphu. Njengoko uqhubeka nohambo, uze ubone imiqondiso obuyibone emaphini, uye uqiniseke ukuba sele uza kufika apho uya khona. Ngoko uThixo uye wasinika iLizwi lakhe elinjengemaphu echaza ngeziganeko ezothusayo eziya kubakho emhlabeni. Njengoko sizibona zisenzeka ezi ziganeko, siyaqiniseka ukuba isiphelo sikufuphi.
IBhayibhile ichaza ukuba iimeko zehlabathi ziya kuba mbi ngeyona ndlela ingathethekiyo, kuze kulandele isiphelo. Ngelo xesha, kuya kubakho iziganeko zehlabathi ezingazange zabonwa ngaphambili. Phawula ezinye zezo ziganeko ezikhankanywe eLizwini likaThixo.
1. IZIDUBEDUBE EZISEHLABATHINI LONKE Isiprofeto esikuMateyu isahluko 24 sichaza iziganeko zehlabathi esiya kubona ngazo xa isiphelo sikufuphi. Ezo ziganeko ziya kuphawula ‘ukupheliswa kwale nkqubo yezinto,’ kuze emva koko “kufike ukuphela.” (Ivesi 3, 14) Ziquka iimfazwe ezinkulu, ukunqongophala kokutya, iinyikima zomhlaba kwiindawo ngeendawo, ukwanda kokuchas’ umthetho, ukungabi naluthando, kunye nokulahlekiswa kwabantu ziinkokeli zonqulo. (Ivesi 6-26) Yinyaniso into yokuba, ezinye zezi ziganeko kudala zisenzeka. Kodwa, njengoko isiphelo sisondela, ziya kwenzeka zonke ngaxesha-nye. Kuya kubakho nezinye iziganeko ezithathu eziya kwenzeka ngelo xesha.
2. INDLELA ABANTU ABAZIPHETHE NGAYO IBhayibhile ithi “ngemihla yokugqibela”—eya kulandelwa sisiphelo—abantu baya kwenza izinto ezimbi nangakumbi. Ithi: “Abantu baya kuba ngabazithandayo, abathandi bemali, abazidlayo, abanekratshi, abanyelisi, abangathobeli bazali, abangenambulelo, abanganyanisekanga, abangenawo umsa wemvelo, abangayifuni kwaphela imvisiswano, abanyelisi, abangenakuzeyisa, iindlobongela, abangathandi kulunga, abangcatshi, abaneentloko ezilukhuni, abakhukhumele likratshi, abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo.” (2 Timoti 3:1-4) Yinyaniso into yokuba, ukungabi nambeko kwabantu akuyonto intsha, kodwa kuye kwaqatsela kule “mihla yokugqibela,” yiloo nto kusithiwa siphila ‘kumaxesha amanqam ekunzima ukujamelana nawo.’ Ngaba uye wakuphawula oku kwindlela abaziphethe ngayo abantu?
3. UKONAKALISWA KOMHLABA IBhayibhile ithi uThixo uza ‘kubonakalisa abo bawonakalisayo umhlaba.’ (ISityhilelo 11:18) Abantu babeza kuwonakalisa njani umhlaba? Ixesha lokuphila kukaNowa lichazwa ngendlela efanayo, ngokuthi: “Umhlaba wawonakele emehlweni oThixo oyinyaniso yaye umhlaba wawuzaliswe lugonyamelo. Ngoko uThixo wawubona umhlaba yaye, khangela! Wonakele,” waza wathi ngabo bantu bangendawo: “Ndiya kubonakalisa.” (Genesis 6:11-13) Ngaba uye wayiphawula into yokuba umhlaba uzaliswe lugonyamelo? Kwakhona, abantu banamandla okuwonakalisa ngokoqobo umhlaba baze babulale bonke abantu abaphilayo kuwo. Banezixhobo zokukwenza oko. Ikho nenye indlela abawonakalisa ngayo umhlaba. Bayaqhubeka besonakalisa umoya esiwuphefumlayo, betshabalalisa izilwanyana nezityalo, bengcolisa nolwandle.
Khawucinge ngoku, ‘Kwiminyaka nje elikhulu edluleyo, abantu babengenawo kwaphela amandla okuzitshabalalisa.’ Kodwa ngoku banamandla okwenza izixhobo eziyingozi nezokutshabalalisa indalo. Kubonakala ukuba ukwanda kweteknoloji kubangela umonakalo abantu abangenakuwubona kwangaphambili nabangakwaziyo ukuwulawula. Noko ke, ikamva lomhlaba alikho sezandleni zabantu. Ngaphambi kokuba abantu batshabalalise yonk’ into emhlabeni, uThixo uza kungenelela aze abatshabalalise abo bawonakalisayo umhlaba. Usiqinisekisa ngoko!
4. UKUSHUMAYELA EMHLABENI WONKE Esinye isiganeko sesokuba kuza kubakho umsebenzi omkhulu obalulekileyo omele wenziwe ngaphambi kokuba isiphelo sifike. IBhayibhile ithi xa ithetha ngesi siganeko: “Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kuwo wonke umhlaba omiweyo kube bubungqina kuzo zonke iintlanga; kwandule ke kufike ukuphela.” (Mateyu 24:14) Lo msebenzi wokushumayela wawuya kwahluka kakhulu kwiindlela ezininzi zokutsalela abantu ezicaweni ebezikade zisetyenziswa kangangamakhulu eminyaka. Ngemihla yokugqibela kwakuya kubalaseliswa isigidimi esikhethekileyo ‘seendaba ezilungileyo zoBukumkani.’ Ngaba likho iqela lonqulo olaziyo elishumayela ngesi sigidimi? Enoba ukhe ubeve abanye beshumayela ngesi sigidimi, ngaba liqaqobana nje elikwindawo ethile kuphela, okanye ngaba lizisasaza ezi ndaba zilungileyo ‘kuwo wonke umhlaba omiweyo ukuze zibe bubungqina kuzo zonke iintlanga’?
UBukumkani bukaThixo bushunyayelwa emhlabeni wonke ngamakhulu-khulu eelwimi
NeWebhsayithi ethi www.jw.org/xh ikwavakalisa esi sigidimi ‘seendaba zilungileyo zobukumkani.’ Ineencwadi ezisichaza ngeelwimi ezingaphezu kwe-700. Ngaba ikho enye indlela oyaziyo ezakhe zasasazwa ngayo iindaba ezilungileyo zoBukumkani emhlabeni wonke? Kwakudala ngaphambi kokubakho kweIntanethi, amaNgqina kaYehova ebesaziwa ngokuzimisela kwawo ukushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. Ukususela ngo-1939, imagazini IMboniselo, yaba namazwi athi kumxholo wayo ngaphandle, “Evakalisa UBukumkani BukaYehova.” Enye incwadi ethetha ngeenkonzo ezahlukahlukeneyo ithi ukushumayela kwamaNgqina kaYehova “kubalasele ngendlela engazange ifikelelwe zezinye iinkonzo.” Ukushumayela kwawo kubalaselisa iindaba ezimnandi zokuba kungekudala uBukumkani bukaThixo buza kuzisa ‘isiphelo.’
ELONA XESHA LIBALULEKILEYO KWIMBALI YEHLABATHI
Ngaba uye waqaphela ukuba zone ezi zinto kuthethwa ngazo eBhayibhileni ziyenzeka kanye ngoku emhlabeni? Sekuphele iminyaka elikhulu ngoku le magazini ichazela abafundi bayo ngeziganeko zehlabathi, ngenjongo yokubanceda baqonde ukuba isiphelo sikufuphi. Nangona ubungqina buzicacele, abanye abantu bayakuphikisa oko besithi kusenokwenzeka ukuba inkcazelo ethetha ngesiphelo ayichananga. Kwakhona bathi kusenokwenzeka ukuba izinto zibonakala ngathi ziya zisiba mbi, kuba nje abantu bekwazi ukubona okwenzeka ehlabathini lonke. Nokuba bangaphikisa bathini na abanye, buya busanda ubungqina bokuba siphila kwixesha elahluke kakhulu embalini yoluntu.
Ezinye iingcali zithi sele kuza kubakho iinguqu ezinkulu kulo mhlaba. Ngokomzekelo, ngo-2014 abanye oososayensi balumkisa iZizwe Ezimanyeneyo besithi ubomi babantu busesichengeni sokuthi shwaka. Oososayensi babhala kuyo bathi: “Ekuphandeni kwethu siye safumanisa ukuba impucuko kunye neteknoloji ziza kuzisa eyona ntlekele yakha yankulu.” Abantu abaninzi baya beyiqonda ngakumbi into yokuba siphila kwelona xesha libalulekileyo kwimbali yehlabathi. Abapapashi bale magazini kunye noninzi lwabantu abayifundayo abayithandabuzi into yokuba ngoku siphila kwimihla yokugqibela yaye isiphelo sikufuphi. Kodwa endaweni yokuba uloyike ikamva, umele uvuye. Ngoba? Kuba unako ukusinda xa kufika isiphelo!
NGABA NGABAPROFETI BENTSHABALALO?
AmaNgqina kaYehova awangobaprofeti bentshabalalo. Ebesoloko eshumayela iindaba ezimnandi ngekamva kangangeminyaka engaphezu kwelikhulu. Ngokomzekelo, indibano yawo ka-1958 eyayinomxholo othi “UBukumkani BukaThixo Buyalawula—Ngaba Isiphelo Sehlabathi Sikufuphi?” yachaza ukuba “Ubukumkani bukaThixo abuzi kutshabalalisa umhlaba, kodwa buza kutshabalalisa ihlabathi likaSathana. Ubukumkani bukaThixo abuzi kuwutshisa lo mhlaba, kodwa buza kubangela ukuba kwenziwe ukuthanda kukaThixo apha emhlabeni njengasezulwini. Ngoko umhlaba, oyindalo kaThixo, uza kuhlala ukho ngonaphakade.”